Uwe na-acha ọkụ ọkụ, ihe oriọna maka ime ụlọ mma Huayi Lighting
.Lọ > Ngwaahịa > Ji achọ Light
Ìhè dị mma, n'ihi agba ha bara ụba, na-adịgide adịgide ma na-echekwa, dị mma maka ebumnuche ịchọ mma. A na-eji ọkụ anyị achọ ihe dịgasị icheListlọ ọrụ mmepụta ihe, ụdị ụdị ọgbara ọhụrụ
Ìhè a haziri, wụnye ọkụ a ji achọ mma na bọọdụ sekọndrị, cables na-agbanwe agbanwe, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Enwere ike iji echiche ndị a na-achọ mma na-achọ mma dị ka ihe eji achọ mma maka ime ụlọ, akwụkwọ ọkụ, bọọdụ na-egosi, tracks, tug wdg.
Mmiri na-adọrọ adọrọ bụ ihe dị n'ime ụlọ na ọ dị ka ọla dị maka ụlọ: ọ na - enyere ohere gị na - enwu enwu. Inweta ụlọ gị ma wepụta atụmatụ kachasị mma site na ịgbakwunye ihe eji achọ mmachi. Ọkụ na-eme ka ọ chọọ ime ụlọ mma maka ọkụ na-enwu, kamakwa maka ịma mma.
Lightdị na-enwu ọkụ bụ ọkachamara nke na-emepụta ihe eji achọ mma, ọpụrụiche na-arụpụta ihe eji achọ mma. Anyị nwere otu nkà nke talent, ọ dị iche iche mere ka ndị ahịa chọọ ihe dị iche iche.
Aluminin dị mfe nke ụlọ na-agbanwe agbanwe na-agbado agbado agba agba agbaji RGB Courry Red Rese Whree maka Hotle / ime ụlọ.
3 Gbanwee onye na-ahụ maka njikwa, bọtịnụ Dimmer,355 ogo blọgharịa ọkụ,3000k-6000k agba.
Onyunyo nke na-eji achọ mma maka ụlọ / nkwari akụAgba: Gold / Chrome
Harware sooro n'elu efere,Waya ikuku,Ahụhụ nke aluminom,Na-ewu ewu
Omenala omenala table oriọna KT20082-1A emepụta
Oriọna Isiokwu Ọdịdị ọdịdị Ihe: Nature Rattan Mechaa: Matt ọcha Isi Iyi: E27 Site na mgbalị anyị na-enweghị mgbagha, a nabatara ngwaahịa a ugbu a n'ọma ahịa ma nwee nnukwu uru azụmahịa.
Elu àgwà omenala kristal chandelier A36D51458-66 N'ogbe-Huayi Lighting
E nyefeela ụlọ ọrụ ahụ na R & D na imewe nke ngwa ahia na itinye ego na mmuta sayensi na teknụzụ. Ndị R & D otu abanyela n'ọtụtụ narị mmadụ, na-eme usoro nyocha na mmepe na nnwere onwe R & D dika isi na nchikota nke mmeputa, imu ihe na nyocha dika inyeaka. O guzosiekwa ike ogologo oge R & D na Mahadum Tsinghua, Mahadum Zhongshan na ulo akwukwo ndi ozo di elu n'elu ikpo okwu nke teknụzụ mpaghara na Engineering Center.
Ahaziri kristal alaka chandelier maka ime ụlọ erimeri B190DM3170-57L
Ahaziri okomoko chandeliers B191DP28018-341 si Huayi Lighting
Ahaziri ime ụlọ ime ụlọ chandeliers B04210-Huayi Lighting
Best omenala n'ala oriọna FT10112 factory price-Huayi Lighting